नियात्रा | मझेरी डट कम
editor — Wed, 12/02/2020 - 19:33
पर्वत म जन्मेको र हुर्केको जिल्ला भएकोले पर्वत जानु आउनु मेरो लागि कुनै नौलो थिएन र होइन पनि । यसपटक पनि मलाई पर्वत जानुपर्यो । एकातिर कोरोनाको महामारीले गर्दा घर छाडेर हिड्नु त्यति सहज थिएन तापनि हाम्रा चाडपर्व, धर्मकर्म आदिको कारणले गर्दा बाध्यतानै परेपछि कार्तिकको २५ गते यात्रा तय गरियो ।
सिर्जनानगरको ऐतिहासिक यात्रा र अक्षरले जुराएको मित्रता
editor — Thu, 01/23/2020 - 20:02
बोझिलो, निरसिलो, विरक्तिएको समयमा पीडाको पहाड बोकेर जीवनगति हाँक्दै गर्दा यात्राका क्रममा यिनै अक्षरहरूलाई साथी बनाएर मनका भावनाहरू शब्दको माध्यमबाट पोख्ने गर्थें । सुनिदिने कोही थिएनन् तर पनि दुखद होस् वा सुखद मेरा आफ्ना प्रिय यिनै थिए, यिनैसँग खेल्थेँ, रमाउने गर्थें । आँसु झर्दा फेरि त्यही कलम समाउने गर्थें । यसरी दिनहरू बितेका थिए ।
bheshraj71 — Tue, 09/24/2019 - 18:27
हाम्रो खुट्टामा लेकाली शित छोइँदा नागीगाउँ वरपरका पहाडी थुम्कामा लेसारिएको थियो पातलो कुहिरो । रातको झरीमा भिजेको रुखपात र घाँसमा बाँकी नै थियो लेकाली चिसो । हिजोको कुस्त हिडाइले शरीरमा थियो थकाइ र दुखाइ । गाउँघर सम्झेर धाउँदैआएकोले मनमा भने दगुर्दैथियो असीम खुसी, उत्सुकता र जिज्ञासाको बिजुली ।
सिंहको मुखबाट पानी झरिरहेको देश
editor — Sun, 09/08/2019 - 19:15
बिहानको ४:३० बजे सिंगापुर ओर्लेका थियौ । भाइ बृहद पहाडी र म । कालो रातले अँझै सिंगापुरलाई ढाकी राखेको थियो । जुनको महिना हप्प गर्मी थियो त्यति बिहान पनि । हामीसँग बजेट कम र घुम्नुपर्ने दुई देश (सिंगापुर र इन्डोनेसिया) । त्यसमा महङ्गो देशमा पर्थ्यो सिंगापुर । हुन त लगभग कहाँ कहाँ जाने, कुन माध्यमबाट र कम बजेटमा धेरै ठाउँ घुमेर रमाइलो गर्ने भन्ने पहिला नै एउटा आइटेनेरी तयार पारेको थिए ।
dotpen — Thu, 08/22/2019 - 21:57
ंंंंं पद्मराज काफ्ले
स्टोनहेंज Stonehenge) इंग्लैंडको विल्टशायर काउन्टीमा एउटा प्रागैतिहासिक अकल्पनीय विशाल कलाकृति लन्दन ब्रिजबाट उत्तरतिर सतासी माइलको दूरीमा अवस्थित रहेछ । अगस्त १७, २०१९ का दिन इँजीनियर श्री हरि नेपाल, प्रोफेसर जया नेपाल, प्रोफेसर डाक्टर रमेश मरासिनी र बिन्दु मरासिनीसमेत सपरिवार इस्ले (Eastleigh) निवासबाट करीब सवाघण्टाको ड्राइभमा पुगियो ।
त्यस दिन प्रकृतिले पनि हामीलाई साथदियो । अघिपछि सदै झमझम बर्षा हुने र चिसो वायुले थुर्थुर कँपाउने ठाउँमा टलक्क टल्कँदै झलत्क झल्कँदै सूर्य देवले पनि स्वागत गरे हामीलाई !
bheshraj71 — Sat, 07/13/2019 - 14:01
"एकछिन डुलेर आउनुहुन्छ त ?" मनको इच्छा बुझेरै बोल्नुभएथ्यो सहसचिव काशीराज दाहाल । दाहाल सरको पाहुना भएर पोखरास्थित उहाँको निवासमा बसेका थियौँ हामी ।
"स्वच्छ हावा खाउँन त एकछिन !" सञ्जय अधिकारीको पनि नयाँ अपेक्षा थिएन पोखरासँग ।
"हो, बिहानीको सिरसिरे हावाको उत्सवमा सहभागी बनौँ न त ।" मैले पनि जनाएथेँ सहमति ।
editor — Wed, 06/19/2019 - 19:58
एक्लै यात्रा गर्न रुचाउने भएता पनि यस पटकको यात्रामा प्रिय मित्र सुदर्शन ढकाल पनि जाने इच्छा देखाउदा म झन रोमान्चित भएको थिए । हुन त यात्राको विषयमा कुरा चलिरहदा थप दुई साथी पनि इच्छुक देखाएको हुँदा हामी चार जना जाने निश्चित भएर विभिन्न ट्राभल एजेन्सी धाउन थाल्यौ । जाने ठाउँ र दिनको निश्चित गरेर चारै जनाको पासपोर्ट जम्मा गरी टिकेटको पक्का गर्ने दिन दुई जना साथीहरुको आआफ्नै कारणले गर्दा जान नमिल्ने कुरा त्यो पनि ट्राभल एजेन्सी को बाहिर ठोकामा पुगेपछि व्यक्त गरे ।
editor — Mon, 04/29/2019 - 18:36
रातको बाह्र बजेको बसको टिकट लिएको थिएँ । भियतनाको होचिमिङ्गबाट क्यामबोडियाको राजधानी “फेनोम फेन”सम्मको लागि । हतार हतारमा भएको थियो यो यात्रा मेरो कारण भियतनाममा भिसाको समस्याले गर्दा । “स्लिपर बस” अर्थात बसभित्र बस्ने सिटको सट्टा सुत्ने सिट भएको बस । साधारण बसको तुलनामा भाडा पनि बढी तिरेर नै यसै बसलाई छानेको थिए । यो एउटा बेग्लै तथा नयाँ अनुभव हुन गइरहेको थियो मेरो लागि ।
editor — Sun, 03/10/2019 - 02:37
साथमा पुराना मित्र शिवकुमार यादव थिए । एका विहानै गोलबजारबाट सिरहा, माडर जाने म्याजिकमा चढ्यौँ । चोहर्वातिर बसबालाहरूले म्याजिकलाई सिरहासम्म मात्रै जान दिँदा रहेछन् ।
editor — Wed, 03/06/2019 - 05:22
प्रमोद प्याकुरेल — Tue, 12/04/2018 - 21:27
दशैं सकिएकै थिएन । फेसबुकका भित्ताहरू राता टीकाले रंगिरहेका थिए । कात्तिक ४ गते आइतबार द्वादशीको दिन बिहानै स्टाटस लेखें, “हिउँ नखेलेको होइन । हिमाल नछोएको पनि होइन । तैपनि कस्तो होला त विश्वको शीर सगरमाथा ? हिँडियो कुतूहल मेटाउने पदयात्रामा ।”
bheshraj71 — Thu, 11/15/2018 - 15:32
एक्लै हिँड्नुमा पनि बडो आनन्द रहेछ । र त, प्रकृतिसँग सम्वाद गर्दै हिँडिरहन चाहन्छु म युगौँयुग ।
सम्बत् २०७५ साल भदौ दोस्रोसाता नवलपुरको रजहरस्थित सामुदायिक प्राकृतिक चिकित्सालयबाट निस्केर छिपेनी टोलतिर सोझिँदा आफैसँग बोलेथेँ म ।
प्रकृतिको आँगनमा निस्कँदा खेतको हरियो उज्यालोले चङ्गिएथेँ । धानको पातमा छोइएको आकास देखेर मुग्ध भएथेँ । कुलोको पानीको मधुरो कलकल, तेजिलो बहाव र सङ्लो लहरसँग सङ्लिएथेँ । त्यही सङ्लो पानीमा पखालिन आइपुगेथे चकचके चरीहरू पनि ।
अपाङ्ग शरीरको सपाङ्ग यात्रा
editor — Sat, 10/27/2018 - 23:16
कहिलेकाहींको यात्रा बडो रोचक हुँदो रहेछ । र, आकस्मिक पनि हुँदो रहेछ । बिमार मुक्तिमार्गतर्फ लम्कन खोज्दा धेरै थरीका यात्रा गरिए । कुनै सुझबुझका यात्रा भए भने कुनै अज्ञानमै यात्रा थालिए र टुङ्गिए । विगत एक वर्षदेखि मैले गरेका यी सबै यात्रा बाध्यताका थिए । बाध्यतामा रहर घोल्न खोज्दा घुल्नै मानेन । र, आखिर बाध्यता अलग्यै बस्यो । रहर केवल रहरमै सीमित भयो ।
मन मुटु चोरेर हेर, त्यहाँ तिम्रो नाम छ
यी छन् र त हामी बाँचेका छौँ